RIKOODH XUN :Manchester United oo aan hal kulan dhalin Shan Gool horyaalka Premier League Mudda 5-Sanaa… Xili Axada ay Wajahaan Manchester City – Gool FM
( Premier League ) 06 Nof 2018. Kulankii ugu dambeyay uu leyliyay Sir Alex Ferguson Manchester United waa mid soo idleeyay xiisihii kooxda, markii ay barbaro 5-5 ay la galeen kooxda West Bromwich Albion.
Kulankaa wuxuu ahaa maalinkii ugu dambeyay xagaagii 2012-13 gaar ahaan 19 bishii May 2013, xiligaana waxay aheyd markii ugu dambeyay oo ay Manchester United ka dhaliyaan horyaalka shan gool hal cayaar.
Tan iyo markaa, 86 kooxood oo ka kala cayaara heerarka kala duwan ee kubbaddda cagta horyaalada England ayaa dhaliyay shan gool kulamo badan. Iyadoo kooxahaas ay kamid tahay naadiga United ay coltamaan ee Manchester City oo 21 kulan si cajiiba u dhalisay min shan gool.
Duncan Alexander oo xogta xaqiiqadan soo dhigay barta Twitter, ayaa ku muujiyay in marka laga reebo United dhammaan kooxaha kale ay min shan gool dhaliyeen kulmadadooda shantii sano ee lasoo dhaafay.
City ayaa ah kooxda ugu badan ee heysata tirada kulamada ay ku badisay shan gool waana 21 cayaar, waxaana ugu dambeysay kulankii todobaadkan ay ku xasuuqday naadiga Southampton 6-1.
Liverpool ayaa dhankooda heysata 12 kulan oo ay ku badiyeen shan gool, Tottenham sagaal cayaar, Arsenal siddeed cayaar, iyo Chelsea oo todoba dheel dhalisay shan gool.
Xittaa kooxda Accrington ayaa dhalisay ugu yaraan shan gool ciyaar kaliya afar jeer tan iyo bishii May 2013. Kooxaha kale ee lama filaanka uga soo muuqday xaqiiqooyinkan waxaa kamida MK Dons oo siddeed kulan shan gool dhalisay, Peterborough oo siddeeda, iyo Cambridge oo iyagana shan kulana.
Dhaleeceentan ayaa mar waliba waxaa loo jeedinayaa kooxda haatan ee United taa oo aan heystan weerar awood leh, inkastoo ay naadiga joogan xiddigo leh tago aad u wanaagsan.
Ninka weerarka uga dheela kooxda ee Romelu Lukaku ayaa wax goola u dhalin Manchester United tan iyo 15-kii September markaa uu gool ka dhaliyay Watford. Tan iyo markaa wuxuu gool la’aan yahay sagaal kulan, inkastoo uu laba gool u dhaliyay qaranka Belgium kulan ay wajaheen Switzerland.
Liverpool oo Baalasha laga rifay...+SAWIRRO